Amanqaku kaRobert Glazer Martech Zone |
Amanqaku ngu URobert Glazer
URobert Glazer ngumseki kunye noMlawuli oLawulayo Amaqabane okukhawulezisa, Umsunguli, kunye noSihlalo weBrandCycle kunye nombhali weNtsebenzo yeNtsebenzo: Ixesha elidlulileyo, ukutshintsha kwexesha elizayo kunye neKamva eliNomdla lokuThengisa. Ungusomashishini osisigxina onerekhodi ekhethekileyo kunye nothando lokukhula kwengeniso kunye neenzuzo zeenkampani ezisekwe kwi-B2C, edibana neemveliso ezinje ngeAdidas, iModCloth, iReebok, iThagethi, iiThint Prints, iGymboree, kunye neWarby Parker.
NgoMvulo, Aprili 24, 2017 NgoLwesibini, Aprili 25, 2017 URobert Glazer
Icandelo lokudibana lilungelelanisiwe. Baninzi abadlali, iileya, kunye neendawo ezihambayo. Ngelixa ezinye zezi zinto ziluncedo zenza imodeli yokuhambelana ukuba yahluke kwaye ixabiseke, njengokudibanisa imbuyekezo kwiziphumo, kukho ezinye ezinganqweneleki kangako. Ngaphezu koko, ukuba inkampani ayibazi, babe semngciphekweni wokonakalisa uphawu lwabo. Ukuba iinkampani zilisebenzise ngokupheleleyo eli thuba kwaye zibuyele kutyalo-mali olunakho ukuba nenkqubo yokubambisana